MAGDHAWGA SHAQO LA'AANTA XAALADA DEG DEG AH EE (PEUC)
Magdhawga Shaqo la'aanta Xaalada Deg deg ah ee xanuunkan waa mashruuc hoos taga caawimada Coronavirus, Kaabista dawlada, iyo badqabka dhaqaale kaas oo uu jidaynayo Xeerka 2020 kaas oo siinaya dheefaha caymiska shaqo la aanta shakhsiyaadkaas dhammeystiray xaq u lahaanshaha ceymiska shaqo la'aanta gobolka. Waa deeq ay bixiso dawlada fadaraalka oo aanay ku jiran cashuurta ay bixiyaan shaqaaleysiiyayaasha gobolku.
MAGDHAWGA SHAQO LA'AANTA XAALADA DEG DEG AH EE XANUUNKAN (PEUC):
Faa'idooyinka dadka ka codsanaaya kabka lacagaha kuwaasi oo horey u qaatay faaidooyinka.
13 Todobaad oo la bixinayo lacago dheeraad ah kuwaas oo ka baxsan inta ugu badan ee shaqo la'aanta joogtada ah.
Shakhsiyaadka aan ku habooneyn xadi isku mid ah oo ah faa'idooyinka caymiska shaqo la'aanta kuwaas oo ay heleen todobaadyadii lasoo dhaafay
Taariikhda Bilaabida: Maarij 29, 2020 (Dhamaadka Todobaadka Abril 4, 2020)
Taariikhda Dhamaadka: Dhamaadka Todobaadka December 26, 2020
DIGNIINTA WAX ISDABO MARINTA!
Hadii si kas ah uu sameeyo ama sababo qof kale si uu abuuro cadaymo been ah ama si ku talagal ah ugu guuldaraysto ama uu sababo in uu qof kale ku guuldaraysto in uu ku sheeo agab xaqiiqo ah kaas oo uu doonayo ugu dambaynta in uu ku helo magdhaw uu keenay xanuunku kaas oo aanu xaq ulahayn sida uu qeexayo xeerka ka hortaga ee 19 kaas qeybta 1001 oo hoos taga xeeka 18 ee Dalka Maraykanka.
Qofka lagu helo in uu galay musuqmaasuq oo soo gudbiya intaa ka dib todobaad ama todobaado oo ah caymiska shaqo la'aanta ay ku jiraan bixin lacageed oo ah PEUC kuma haboonaan doonto in ay hesho wax dheeraad ah oo lacag ah mustaqbalka soo socda ka dib diidmadaas.
Joojinta shaqo bilaa sabab ah si aad u hesho faa'idooyin dheeraad ah oo hoos imanaya mashruuca UI ama xeerka daryeelka waxa loo tixgalinayaa musuqmaasuq ama wax isdaba marin Hadii aad hesho faa'idooyinkan adigoo ku helaya wax isdaba marin, kuma haboonaan doontid in aad hesho kab dheeraad ah, waa in aad iska soo celisaa faa'idada sida uu qeexayo xeerka ciqaabeedka 1001 farqadiisa 18 ee dalka Maraykanka.
Been abuur ku tala gal ah oo laga wariyay dakhli la shaqaystay todobaad cayiman oo uu qof ku cabanayo in uu helo caymiska todobaadlaha ah waxay keeni kartaa in lagugu helo wax isdaba marin oo aad waydo faa'idadas iyo bixinta dheeraadka ah, waxaa intaa dheer ciqaabo kale oo dheeraadka ah xukunka dambiyo kale.
MACLUUMAAD KALE OO MUHIIM AH OO KU SAABSAN CIDA CABANAYSA
Waajibaadka taageerida caruurta waa in laga jaraa bixitaanka PEUC si isku mid ah oo joogto ah faa'idoyinka caymiska kabka ah.
Bixitaanada PEUC waa la cashuurayaa. Bixintan waxa ku jiri doona 1099G gaaga kaas oo aad ka heshay cashuur sanadeedka 2020. Cashuurta waa laga jari doonaa bixitaanada PEUC hadii aad dooratay in laga jaro cashuurta kabka caymiska shaqo la'aanta.
Shaqaalaha lagama qaadi doono kabka ay bixiyeen shaqaalaha helay PEUC
Hadii aad siiso shaqo dad shaqaale ah iyadoo uu dhamaaday xanuunkan oo ay shaqaalaaguna diideen in ay kusoo laabtaan shaqada, waa in aad soo ogoysiisaa Waaxda shaqaalah adiga oo laga xidhidhaya linkigan: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/job-offer-decline-form-employers
Shaqaalaysiiyaasha waa in ay hubiyaan in ay si dhaw oo dhakhso ah usoo buuxiyaan warbixintooda sadexbiloodlaha ah caymiska sidaa darteed si ay shaqaalahoogu ku heli karaan kabka sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan.
Shaqaalaha waa in ay ka jawaaban dhamaan fariimaha dadka cabanaya (65-5317) ama fariimaha SIDES hadii cabasho laga soo gudbiyo qof aan shaqaynayn sabab aan ahayn COVID-19.
Shaqaalaha waa in ay ka jawaaban dhamaan fariimaha dadka cabanaya (65-5317) ama fariimaha SIDES lacag bixinkasta oo lasiinayo qof ku maqan xanuun ama kabka lasiinayo qof wax kale ku maqan.
MACLUUMAADKA SHAQAALAHA/ XOOGSADAYAASHA UU SAAMEEYAY COVID-19
Hadii aanad u shaqaynayn COVID-19 awgeed waa in aad soo gudbisaa cabashadaada codsiga caymiska shaqo la'aanta onlaayn si aad u hesho nooc kasta oo ah caymiska shaqo la'aanta.
Cabashadaada dib ayaa loo eegi doonaa hadii aad ku haboontahay kabka caymiska shaqo la'aanta. Hadii aad dhamaysatay faa'idadii oo aanad awood u lahayn in soo gudbisato cabasho cusub ilaa faa'idaada sanadka dhacdo, waxaad ku haboonaan kartaa in aad hesho ilaa 13 todobaad oo faa'ido dheeraad ah oo lasoo dhexmarinayo mashruuca PEUC.
Marka aad lacag ka hesho mashruuca PEUC, waxaad wali u baahandoontaa in aad soo sheegto kabka lacagta todobaadlaha ee aad hesho. Waxa lagugu siin doonaa dariiqo isku mid ah oo oo lagugu siin jiray kabkii hore.
Marka cabashaadadu dhacdo, waxaad u baahantahay in aad soo dirsato cabasho cusub, xataa hadii ay wax kuugu jiraan hadhaagaaga PEUC.
KU HABOONAANSHAHA SHAQSIYEED
Si aad ugu haboonaato kabka Mashruuca Magdhawga Shaqo la'aanta deg deg ah ee xanuunkan, Ashkhaasta waa in:
Miyay dhamaysatay dhamaan gobolka ama fadaraalka bixinta faa'idada caymiska ee shaqo la'aanta.
Waa in aad awood u yeelataa oo lagaa helaa shaqada oo si firfircoona u qabata shaqada, hadii kale oo aanad awood u lahayn in aad qabato sababo la xidhiidha COVID-19.
Dhamaystir oo ilaali xogta baadhitaanada shaqada (hadii baadhitaanada loo baahdo cabashadaada).
Ka warbixi dakhli kasta oo la daboolay in lagu gudo jiro todobaadka cabashada. Dakhliyada la daboolay oo ay ku jiraan , lakin aaan wali loo xadidin mushaharada, wakhtiga qofku ku maqanyahay xanuunka, fasaxyada la bixiyay,fasaxyada maalmaha fasaxa ah.
Kuwa aan ku haboonayn Xaalada deg deg ah ee magdhawga shaqaale la'aanta xanuunka oo ay ku jiraan shakhsi:
Kaas oo leh awooda uu kagasoo shaqaynayo meel fog (guriga) oo la siinayo mushahar oo wali lasii shaqayndoona saacado la mid ah kuwii uu markii horaba shaqayn jiray waxaanu heli doonaa mushahar la mid ah.
Cida helaysa bixin xanuun awgeed ama bixin oo aad kaga baxayso faa'idada iyo kuwa siyaadsada xadigooga todobaadlaha ee PEUC.
Cida ku haboon heer gobol kale ama fadaraal ee mashruucan [ oo ay ku jiraan caymiska shaqo la'aanta (UI), magdhawga shaqo la'aanta ee shaqaalaha fadaraalka(UCFE), Magdhawga shaqaalaha xubnaha ka ah ee dibada(UCX), Faa'idooyinka la fidiyay, iyo magdhawyada mudada gaaban/ Mutadawacnimada ah (STC/VSW)].
Hadii aanad haysan cabasho shaqo la'aaneed, kusoo gudbiso hab onlaayn ah si aad dib ugaga shaqaysiiso cabasho: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits
Hadii aad dhawaan soo gudbisatay cabasho caymis shaqo la'aaned oo ay faa'idadiina dhamaatay, fadlan la xidhiidh qaybta Shaqaalaha 866-239-0843
Dirso ama/ sii wad si aad u codsato cabashadaada todobaadlaha ah adigoo maraaya hab online ah: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim
Waxaad heli doontaa cadayn laguugu soo diri doono email ka si laguugu wargaliyo xadiga kugu haboon ee mashruuca PEUC.
SIDEE AYAAD U DIRSANAYSAA CABASHADAADA TODOBAADLAHA AH:
Dhamaan cabooshoyinka todobaadlaha ah ( joogtada UI ama Magdhawga Shaqo la'aanta ee fidsan ) waxa lagu soo gudbisan doonaa hab online ah adigoo raacaya linkigan hoose https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim
SAACADAHA LASOO GUDBINAYO CABASHADA TODOBAADLAHA AH
Axada - 8:00 am ilaa 7:30 pm
Wixii su'aal gaar ah oo la xidhiidha cabashadaada, fadlan la xidhiidh uiclaimshelp@iwd.iowa.gov ama nagasoo wac 866-239-0843.